Dainik Patra-मोफसलको सर्वाधिक बिक्री हुने दैनिक पत्रिका
सयांै रुख एकै पटक काटिंदै
तेजेन्द्र के. सी. बुटवल, ८ जेठ । लुम्बिनी साझेदारी वन रूपन्देहीमा सयौं रुख एकै पटक काट्ने तयारी भएको छ । रुख काट्नको लागि जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीले ३ वटा काष्ठ उद्योगलाई बुधबार स्वीकृति प्रदान गरेको सोझा महिलालाई लागूऔषधका भरिया बनाइँदै
किरणमान बज्राचार्य कपिलवस्तु , ८ जेठ । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चरेश लिएर भारत प्रवेश गरेकी शिवपुरकी सम्झना घर्तीलाई वैशाख २२ गते पक्राउ ग¥यो । कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमा पारि बढ्नीमा पक्राउ परेकी उनीबाट ३ किलो सम्पादकीय
कांग्रेसमा देखिएको विवाद
नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । पार्टी नेताहरूले नेपाली राजनीतिमा आएको परिवर्तन अनुसारको पार्टी प्रणाली निर्माण गर्न चाहेको देखिंदैन । प्रायः सबै पार्टीका नेताहरू जमिन्दारजस्ता, पार्टीहरू मौजाजस्ता र कार्यकर्ताहरू रैतीजस्ता बनेका Full Story...
सामाजिक अर्थशास्त्रको पूर्वीय परम्परा
डा. बाबुराम ज्ञवाली आधुनिक अर्थशास्त्र जसको जन्म वेल्थ अफ नेशनसको रूपमा भएको हो र जसका जन्मदाता एडम स्मिथ मानिन्छन् ले यस विषयलाई राजनैतिक अर्थशास्त्र मानेका थिए । पश्चिमी जगतमा धेरै समयसम्म यसको नाम पोलिटिकल इकानोमी Full Story...
‘संघीयताका कारण संविधान बनेन’
समसामायिक राजनीतिक अवस्थालाई यहाँको पार्टी र यहाँले कसरी लिनु हुन्छ ? अब भन्नलाई मानिसहरूले संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ भनेका छन् तर यही संक्रमणका नाममा भ्रष्टाचार बढेको छ । देशको राष्ट्रियता सबै खतरामा छ । चारैतिर लथालिंग Full Story...
मेषः अपुरो काम पुरा समय आएको छ । सानातिना अवरोधहरु आफै पार लाग्नेछन् । प्रशन्नताको सीमा रहने छैन । बृषः दुरदेशका मित्रसँग भेट हुनेछ । सुखद समाचार आउने छ । उपहार पुरस्कार आदि प्राप्त हुने Full Story...
गुआङ्गसीमा भारी वर्षाबाट दुई लाख प्रभावित
अमेरिकी चालकरहित विमान आक्रमणमा पाँचको मृत्यु
अमेरिकी यात्रुबाहक रेल दुर्घटनामा साठी घाइते
उत्तर कोरियाद्वारा छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार
शरिफको सपथमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण
माग पूरा नभएको भन्दै उद्योगीले प्राधिकरणमा तालाबन्दी गर्ने
दाङका सुन पसल तीन दिनदेखि बन्द
राष्ट्र बैंकको मनी चेन्जरमाथि कडा निगरानी
आगामी बजेट नतिजामुखी र फरक विशेषतासहित ः अर्थमन्त्री
लोडसेडिङ कहिले हट्छ
डिएमसीको शानदार जित
सडेन डेथमा फर्साटिकर विजयी
तरुण दल अन्तर क्लब फुटबल भैरहवामा सुरु
किम्बर्लीमा बेल्ट टेष्ट तथा डोजो उद्घाटन